Mayelana NATHI | Haiside
Ukwethembeka kuyindlela eya empumelelweni yebhizinisi. Thatha izibopho zomphakathi ngobuqotho futhi wakhe ibhuloho lokuwina ngokunqoba.
ILuoyang Haiside Heavy Industry Co., Ltd.
ILuoyang Haiside Heavy Industry Co, Ltd. itholakala eLuoyang, idolobha lakubo peony, idolobha elidumile elingokomlando namasiko. Umlando omude namasiko kuye kwondla ukukhula kweHaiside futhi kwadala isiko lawo lokusebenzisana “lokuthembeka nokwethembeka”.
IHaiside ifakwe imishini eyinkimbinkimbi yokucubungula nokuhlola, kanye nelabhorethri ehlukanisa uketshezi oluqinile, engaqedela yonke inqubo yokuthuthukiswa kwemishini kusuka ocwaningweni lomkhiqizo nentuthuko, ukwakhiwa, ukukhiqizwa, kanye nokuhlolwa kwefekthri.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi uchungechunge oluhlukahlukene lokudlidliza okokudlidliza, izixhumo zentwasahlobo zenyoka, ama-centrifuge amalahle ahlanzekile kanye ne-slime, kanye nezihlungi zediski eziqondile ezimise okwe-desulfurization gypsum dehydration.
IHaiside ithole iziqu noma izihlonipho ezifana ne- “ISO9001-2008” isitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi
U-Haiside uqasha amathalente futhi aqeqeshe iqembu lobuchwepheshe eliqeqeshiwe kakhulu
Ukuba namakhasimende kuzoba ikusasa lenkampani, futhi amakhasimende azohlala enguNkulunkulu wenkampani.
IHaiside ibilokhu ihambisana nefilosofi yokuphathwa kwezinkampani “esezingeni lokusinda, ubuchwepheshe bezentuthuko, insizakalo yokwethembeka”, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphansi futhi ezingabizi kakhulu, futhi zihole phambili ekusebenziseni izinsiza “zasendlini” ngesikhathi isikhathi sewaranti semishini, Ukuze amakhasimende akhetha imikhiqizo ye-Hiside angabi nazinkinga
Ukwethembeka kuyindlela eya empumelelweni yebhizinisi. Abasebenzi bathembekile enkampanini, futhi inkampani iwina ukwethenjwa kwamakhasimende.
Qhubeka nokwenza ngcono ikhwalithi nensizakalo ephelele. Ikhasimende kuqala, ushintsho nokwenza okusha.
Ungavumeli ukuhamba kwawo wonke ama-nuance enqubweni yokukhiqiza. Izinga lokuphasa lokuhlolwa kwesikhathi esisodwa lingaphezu kwama-98%, kanti izinga lokuphasa lemikhiqizo lingu-100%.
Uma unenhloso yokubambisana, noma ufuna ukwazi kabanzi ngathi.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi noma ukusishiyela umlayezo.